Ra’iisul Wasaaraha oo Garowe kula kulmay Saraakiishii ka gadooday Puntland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid ayaa xalay kulan kula qaatay magaalada Garowe Saraakiishii hogaamineysay ciidamadii dhowaan ka gadooday Maamulka Puntland, kuwaasoo ku sugnaa deegaano ka tirsan Gobolka Nugaal.
Wararka ayaa sheegaya in Labadan Sarkaal ee gadooday xalay kulan albaabada u xirnaa oo muddo saacado socday la qaateen Ra’iisul Wasaaraha, waxaana kadib kulan gaar gaar la qaateen Mas’uuliyiinta Maamulada Puntland iyo Jubba.
Saraakiishan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ku rajo weyn yihiin in xal laga gaaro khilaafka, isla markaana ay aqbali doonaan awaamiirta uga imaaneysa madaxda, waxgaradka iyo bulshada.
Dhinaca kale Ra’iisul Wasaaraha ayaa lagu wadaa inuu maanto gaaro degmada Qardho, halkaasoo uu kula kulmi doono waxgaradka, Isimada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, iyadoo mar kale uu natiijo la’aan ku soo dhamaaday wada hadalkii Madaxda uga socda Garowe.